A na-akpọ ihe nzacha nke nchara nchara nchara nchara. Ihe nhicha ahụ bụ nke eji ihe ntanetị ise mejupụtara ụgbụ nke na-eme ka ọ dị elu site na superposition na agụụ sintering. Myọcha mmewere nke igwe anaghị agba nchara sintering ihuenyo ka nke igwe anaghị st ...
1. enwere usoro ihe eji edozi maka ihe nhicha sintered? Enwere m ike ịzụta mmezi nhazi ọkọlọtọ? Azịza: dị nwute, ihe nhicha sintered abụghị akụkụ ọkọlọtọ. Emekarị, ọ na-emepụta site na emeputa dị ka a usoro nke zuru ezu ụkpụrụ ndị dị otú ahụ dị ka size, udi, ihe onwunwe na iyo val ...
Ihe omuma nke nchara waya nchara
Dị ka akụrụngwa, igwe anaghị agba nchara waya ntupu nwere ike kere abụọ na ụdị: silk ihuenyo na metal waya ihuenyo. Ihuenyo silk bụ ihuenyo mbụ, a na-agbanwekwa ihuenyo nchara nchara site na ákwà nchara. Igwe anaghị agba nchara ntupu na-bụ-eji maka echetakwa na nzacha unde ...
Automotive Myọcha, Ihe nzacha mmiri, Air Nzacha, Igwe anaghị agba nchara Myọcha, Ọrụ gas gasị, Igwe anaghị agba nchara ikuku filtration,